Global Voices teny Malagasy » Mitahiry Ireo Fijoroana Vavolombelona Tamin’ny Fanafihana Ataomika ny ‘Rakitr’i Hiroshima’, Navaozina sy Voadika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2016 10:30 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Tantara, Teknolojia
Dikasarin'ny Rakitr'i Hiroshima, fitaovana fijerena sarintany anaty aterineto .
Misy tetikasa sarintany afaka kitihana vao nadika teny , manambatra ny fijoroana vavolombelona mivantana avy amin'ireo maro nanatri-maso, mba hiraketana feno ny fidarohana baomba an'i Hiroshima sy ireo vokany taorian'io.
Ny tanjon'ny Rakitr'i Hiroshima  sy ny tetikasa teo aloha momba ny sarintany firaketana ny fidarohana baomba an'i Nagasaki , dia ny hitahiry ny fahatsiarovana izay zava-nitranga, raha 70 taona mahery izay no lasa hatramin'ny nahataperan'ny ady, ary vitsy ihany sisa ireo vavolombelona sy ireo tsy maty fo aman'aina tamin'izany no mbola velona mba hampita ny tantarany.
Ny 6 Aogositra 1945 , tanatin'ireo andro faran'ny Ady Lehibe faha II, nisy fiaramanidina Amerikana nandatsaka baomba ataomika tao amin'ny tanànan'i Hiroshima, any andrefan'i Japana. Olona hatramin'ny 80.000 , 30% an'ny mponin'i Hiroshima, no maty tsy tra-drano, ary potipotika ny ankamaroan'ny tanàna. Telo andro taty aoriana, ny 9 Aogositra 1945, niaina tranganà fanafihana toy izay ihany koa ny tanànan'i Nagasaki .
Manome fahatsapàna manokana ny zavatra niseho nandritra ny fidarohana baomba ny Rakitr'i Hiroshima . Ohatra, amin'ny fampiasàna ilay fitaovana ao anaty Aterineto , afaka mijery ny sarintanin'i Hiroshima tamin'ny taona 1945 ireo mpampiasa ny rakitra, sady mijery ireo tantara sy sarin'ireo tsy maty fo aman'aina, ary mijery ny toerana nisy azy ireo tany Hiroshima tamin'ny fotoanan'ny fanafihana. Azo atao avy eo ny mivadika amin'ny sarin'i Hiroshima hita an'habakabaka amin'izao fotoana, mba hijerena ny fiovan'ilay toerana tao anatin'ny taona maro hatry ny taona 1945.
Mametraka anaty sarintany ny fijoroana vavolombelon'ireo tsy maty fo aman'aina tamin'ny fidarohana baomba, sahala amin'i Hiroso Niimi , ny Rakitr'i Hiroshima. Dikasary avy amin'ny Rakitr'i Hiroshima .
“Maherin'ny 70 taona no lasa hatry ny nilatsahan'ireo baomba ataomika teo ambonin'i Hiroshima sy Nagasaki,” hoy ny lehiben'ny tetikasa, Hidenori Watanave,  tanatinà tafatafa niarahany tamin'ny Global Voices mikasika ny Rakitr'i Hiroshima. “Vitsy sisa ireo tsy maty fo aman'aina mbola velona ankehitriny ary atsy ho atsy dia tsy hisy intsony. Iza ary avy eo no afaka hiresaka avy amin'ny trangam-piainany manokana mikasika ny vokatry ny ady nokleary atao amin'ny vahoaka eto an-tany?”
Manome fanolorana ny votoaty sy halalin'ilay rakitra anaty Aterineto ny horonantsary iray fanoroana ilay rakitra amin'ny teny Japoney niaingany, izay hita ao anaty Aterineto hatry ny taona 2011:
Ankoatra ny fandikàna azy vao haingana izay tamin'ny teny Anglisy, dia nifindra avy tao amin'ny Google Earth ho aminà endrika vaovao izay afaka jerena mora amin'ny fitety anatinà rafitra fikirakirana, na inona izany na inona, ilay fitaovana fijerena sarintany ao anaty Aterineto.
Dikasarin'ny horonantsary fanoroana ilay sarintany azo kitihana mirakitra ny Tsunami tao Tohoku. Sary nalaina tao amin'ny YouTube.
Misy ireo vinavina ny hampiasa ny Rakitr'i Hiroshima  sy ny Rakitr'i Nagasaki  mandritra ireo fivoriana roa mikasika ny fandriampahalemana ataon'ny tanora any Boston sy any New York. Ahitàna ny fandraisam-pitenenan'ireo tsy maty fo aman'aina nandritra ny daroka baomba ataomika ka monina any Etazonia izany tetikasa izany, ao ihany koa ny fampirantiana ireo fitaovana rakitra; sy ny fahafahan'ireo tanora Japoney sy Amerikana miresadresaka, ary koa ireo mpandray anjara hafa sy mpikambana ao amin'ny mpanatrika.
Check out @hwtnv ‘s plans for a high school peace conference featuring the Hiroshima Archive: https://t.co/nKzbq5ipPI  pic.twitter.com/r1P0tXeqZR 
— Cesium (@CesiumJS) June 13, 2016 
Jereo ireo drafitrasan'i @hwtnv ho an'ny fivoriana mikasika ny fandriampahalemana ataon'ny sekoly ambaratonga faharoa, mampiseho ny Rakitr'i Hiroshima
Mitady fanampiana amin'ny alàlan'ny fikaroham-bola eny ifotony  ireo mpianatry ny sekoly ambaratonga faharoa any Hiroshima sy Nagasaki izay mikarakara ilay fivoriana:
Ireo amintsika izay tafiditra anatin'ny Rakitr'i Nagasaki/Hiroshima dia te […] handefa ireo mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa avy ao Hiroshima sy Nagasaki ho any Etazonia, mba hihazona ny Fivoriana ho an'ny Fandriampahalemana ataon'ny Mpianatra Any amin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa ao Japana-Etazonia. Ahitàna mpianatra teratany Japoney sy Amerikana avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ilay fivoriana, ary koa ireo olon-tsotra niharan'ilay daroka baomba izay miaina any Etazonia.
Afaka hita eto  ny andinindininy bebe kokoa mikasika ilay hetsika fanangonam-bola.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/21/84447/
 tetikasa teo aloha momba ny sarintany firaketana ny fidarohana baomba an'i Nagasaki: https://globalvoices.org/2015/08/07/before-and-after-the-bomb-an-interactive-tour-of-nagasaki/
 6 Aogositra 1945: http://www.newyorker.com/magazine/1946/08/31/hiroshima
 Olona hatramin'ny 80.000: http://www.hiroshimacommittee.org/Facts_NagasakiAndHiroshimaBombing.htm
 niaina tranganà fanafihana toy izay ihany koa ny tanànan'i Nagasaki: http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/bomb/large/documents/index.php?pagenumber=15&documentid=65&documentdate=June%2019,%201946&studycollectionid=abomb
 Hiroso Niimi: http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=26979
 Hidenori Watanave,: http://researchmap.jp/hwtnv/?lang=english
 Cesium, : https://cesiumjs.org/team.html
 tetikasa vaovao firaketana an-tsarintany: http://iwate.mapping.jp/
 horohorontany sy tsunami tany Japana : https://globalvoices.org/specialcoverage/2011-special-coverage/japan-earthquake-tsunami-2011/#featured
 Rakitr'i Hiroshima: http://hiroshima.mapping.jp/
 Rakitr'i Nagasaki: http://nagasaki.mapping.jp/
 June 13, 2016: https://twitter.com/CesiumJS/status/742376762626183168
 fikaroham-bola eny ifotony: https://www.makuake.com/en/project/nagasaki-hiroshima-archive/